Akpanaka akpaaka Galvanized Roller Shutter Door China Manufacturer
Nkọwa:Ọnụ ụzọ na-ahụ maka windo na-agba ígwè Galvanized,Oghere Galvanized akpaaka,Ogwe ụzọ nkwụsịtụ akpaaka
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ Ntugharị Roller > Ọnụ ụzọ na-ahụ maka windo na-agbanye galvanized > Akpanaka akpaaka Galvanized Roller Shutter Door
Ihe Nlereanya.: RS-01
1. Ogwe a na-ekpuchi ihe a na-ekpuchi na-eme ka ọkpụkpụ na-ekpo ọkụ.
2. Ọkpụkpọ windo a na-agbanwe agbanwe dị iche na ụdị mpempe akwụkwọ na-agagharị agagharị maka ihe onwunwe na nkwụsị. New opening shutter
nwere ike igbochi irradiation siri ike na mgbakwunye ụda.
3. Ịgba ọsọ nke windo na-agbanwe agbanwe bụ nnọọ. Ngwá ọrụ na-erughị 58.
4. Oghere na-ebugharị na-emepụta ya na ngwaọrụ mkpọchi ndị mgbochi. Ozugbo ọ mechiri, ị pụghị imeghe site n'èzí. Na
nwere ike imeghe aka ma ọ bụrụ na ọ nweghị ọkụ eletrik. Ọnụ ọsọ ahụ nwere ike ịdị elu ruo 0.1m / s.
5. Ọdịiche dị iche iche na agba maka nhọrọ gị.
Anyị nwere ike ịmepụta ụzọ ọ bụla ị ga-eji kpuchie ọnụ ụzọ maka gị.
Biko jiri obi ebere chee na ị nwere ajụjụ ọbụla.
Ngwaahịa : Ọnụ Ụzọ Ntugharị Roller > Ọnụ ụzọ na-ahụ maka windo na-agbanye galvanized
Ebe nchekwa Zipper PVC Roller Onwe Repair Door Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ mgbochi nke mpụga akpaaka na-arụ ọrụ Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ ụzọ na-ahụ maka windo na-agba ígwè Galvanized Oghere Galvanized akpaaka Ogwe ụzọ nkwụsịtụ akpaaka Ọnụ ụzọ na-ahụ maka windo na-agbanye galvanized Ọnụ ụzọ nkedo na-agba ọsọ ngwa ngwa Ọnụ ụzọ nkedo ngwa ngwa Ọnụ Ụzọ Ntube Na-ahụ Maka Mpaghara Ọnụ ụzọ nkedo na-atụgharị anya